VKD3D-Proton 2.5 inosvika, forogo yeVkd3d ine Direct3D 12 kuita | Linux Addicts
VKD3D-Proton 2.5 inosvika, forogo yeVkd3d ine Direct3D 12 kuita
Valve ichangobva kuburitsa kuburitswa kwe iyo nyowani vhezheni ye VKD3D-Proton 2.5, iyo yakaiswa seforogo yevkd3d kodhi base yakagadzirirwa kuvandudza Direct3D 12 kuenderana muProton mutambo wekuvhura.
Kune avo vasati vaziva nezveVKD3D-Proton, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi Inotsigira Proton-chaicho shanduko, optimizations, uye kusimudzira kwekuita zvirinani kweDirect3D 12-yakavakirwa Windows mitambo., izvo zvisati zvagamuchirwa muchikamu chikuru chevkd3d. Pakati pemisiyano, pane zvakare tarisiro pakushandisa yemazuva ano Vulkan ekuwedzera uye kugona kweazvino mavhezheni emifananidzo madhiraivha kuti uwane yakazara Direct3D 12 kuenderana.
Saizvozvo Valve inoshandisa forogo yakatsanangurwa muWine-based package kumhanyisa Windows Proton mitambo. Iyo DirectX 9/10/11 tsigiro muProton yakavakirwa paDXVK package uye iyo DirectX 12 kuita kusvika parizvino yanga yakavakirwa pavkd3d raibhurari (mushure mekufa kwemunyori wevkd3d, CodeWeavers yakaenderera mberi nekuvandudzwa kwechikamu ichi newaini. community).
Kuvandudzwa kweVKD3D-Proton kwaisanganisira Hans-Kristian Arntsen, SPIRV-Cross munyori uye mugadziri weimwe Vulkan API extensions, Philip Rebohle, DXVK munyori, naJoshua Ashton, D9VK munyori anoshandira Valve.
VKD3D-Proton haina kuitirwa kuchengetedza kumashure kuenderana kweiyo yekutanga vkd3d API uye haidzivise kugumiswa kwerutsigiro rwevakuru GPU uye vatyairi vemifananidzo.
Chii chitsva muVKD3D-Proton 2.5?
Mune iyi vhezheni itsva rutsigiro rwakakwana kana rushoma rweDXR 1.0 API rwaitwa (DirectX Raytracing) uye kuyedza tsigiro yeDXR 1.1 (inogoneswa nekuisa nharaunda inoshanduka VKD3D_CONFIG = dxr | dxr11 «).
Kunyangwe zvataurwa izvozvo muDXR 1.1, haasi ese mabasa achiri kuitwa, asi rutsigiro rwe online ray tracing rwagadzirira. Mitambo yekumhanya inoshandisa DXR inosanganisira Kudzora, DEATHLOOP, Cyberpunk 2077, World of Warcraft, uye Resident Evil: Village.
Kune masisitimu ane makadhi emifananidzo NVIDIA, rutsigiro rweDLSS tekinoroji yakawedzerwa, iyo inokutendera kuti ushandise maTensor cores emakadhi emifananidzo eNVIDIA kuyera mifananidzo yechokwadi uchishandisa nzira dzekudzidza muchina kuti uwedzere kugadzirisa pasina kurasikirwa nemhando.
Izvo zvakare zvinoratidzika kuti yakawedzera rutsigiro rwePCI-e Resizable BAR tekinoroji Base Kero Marejista), iyo inobvumira iyo CPU kuwana ese vhidhiyo ndangariro yeGPU uye mune mamwe mamiriro inowedzera kuita kweGPU ne10-15%. Iyo optimization maitiro inoonekwa zvakajeka muHorizon Zero Dawn uye Rufu Stranding mitambo.
Nezve kugadziriswa zvakaitwa zvinotevera zvakataurwa:
Yakagadzirisa cheni yekuchinjana inoratidzira latency HANDLE maitiro anogadzirisa manyepo ekufa mune dzimwe nguva.
Yakagadzirisa nyaya dzakawanda dzine chekuita nekudzika template kubata, iyo yakagadzirisa nyaya dzakasiyana muDEATHLOOP, F1 2021, WRC 10.
Yakagadziriswa DIRT 5 inopa kuparara uye nyaya. Inofanirwa kutamba zvizere ikozvino.
Yakagadzirisa dzimwe nyaya dzekupa muDiablo II Akamutswa.
Shadowing bugs dzakagadziriswa muPsychonauts 2.
Workaround yeimwe Unreal Injini 4 shadowing bugs inokonzeresa akawanda mazita.
Yakagadzirisa dzimwe nyaya dzekugadzikana kana VRAM yapera paNVIDIA.
Yakagadziriswa CPU kuparara muFar Cry 6 yekutanga kutevedzana (mutambo uchine zvimwe zvipembenene, asi zvinosanganisirwa mumutambo).
Yakagadzirisa tsikidzi dzakasiyana nemifananidzo inooneka.
Yakagadzirisa akasiyana DXIL shanduko bugs.
Alternative invariable geometry mhinduro dzemitambo chaiyo inoida.
Gadzirisa kuti d3d12.dll inotumira kunze zviratidzo sei kuti ienderane neMSVC.
Yakagadzirisa zvimwe zvakanyanyisa zviitiko mu bit field mirairo.
Dzivisa yakanyanyisa CPU memory kuvaka pane chaiyo shanduro yeNVIDIA mutyairi aive nebug iyi.
Yakagadziriswa regression mune Yakaipa Genius 2: Kutonga Kwenyika.
Gadzirisa tsikidzi muHitman 3.
Yakagadziriswa kupa kwenzvimbo muAnno 1800.
Yakasiyana-siyana bug kugadzirisa uye kugadzirisa.
Uye kana uchida edza Proton pane Steam izvozvi, iwe unotoziva kuti iwe unogona kuisa iyo Steam mutengi kubva ku zviri pamutemo webhusaiti, kunyangwe iwe uchizozviwana zvakare mune repos yeakawanda distros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » VKD3D-Proton 2.5 inosvika, forogo yeVkd3d ine Direct3D 12 kuita